HomeKit Inoenderana Ino Imba Yemwenje Kutenda Koogeek | IPhone nhau
HomeKit-inoenderana nemwenje yekuvhenekesa yekutenda kuna Koogeek
HomeKit inotibvumidza kushandisa nhamba hombe yezvigadzirwa kuti tiite zvakajairika mabasa mumba medu, uye pakati peiyo hombe runyorwa rwezvishongedzo zvinoenderana neApple chikuva mira pamusoro pezvose zvakagadzirirwa mwenje.
Koogeek inotipa mhinduro dzinoverengeka dzekugadzirisa uye kudzora mwenje wepamba, kuchinjika kune yega mamiriro uye kudiwa. Ipulagi iyo inokutendera iwe kudzora zvaunobatanidza kwazviri, girobhu re LED rine mamirioni gumi nematanhatu emavara uye switch iyo inokutendera iwe kudzora mwenje weyese imba. Isu takavaedza uye tinokuratidza pavhidhiyo.
1 Kubatanidza kweWiFi kudzivirira matambudziko emhando
2 Imba kana Koogeek Kumba kunyorera, iwe unosarudza
3 Zvishongedzo zvinoenderana nezvatinoda
4 Siri, otomatiki, nharaunda ...
5 Chiyero cheMupepeti
Kubatanidza kweWiFi kudzivirira matambudziko emhando
Zvese izvi zveKoogeek zvishongedzo zvine peculiarity izvo zvinoita kuti zvinyanye kunakidza: vanobatana kune yako WiFi network uye iwe haudi chero rudzi rwebhiriji kuti uzvidzore. Izvi zvinoreva kune rimwe divi kuti hapana chikonzero chekuita mari mune chimwe chinhu chinowanikwa icho chinovaabatanidza kunzvimbo yedu yekuwana, ingave Apple TV, iPad kana HomePod, uye kuti hazvizove nebasa kuti vasvika kure zvakadii. zvinobva kwavari, zvatove chii nekuvabatanidza kune yedu yepamhepo WiFi netiweki ivo vanobva vangozvibatanidza needu HomeKit yepakati hapana kudiwa kwemamwe marongero.
Ehe, inowirirana chete ne2,4GHz networkChengeta izvi mupfungwa paunenge uchigadzirisa yako router. Kubatana kweWiFi kunobvumidzawo nguva dzekupindura kuve shoma, chimwe chinhu icho michina inobatana kuburikidza neBluetooth isingazvirumbidze. Kubva panguva yaunodzvanya bhatani remagetsi pane yako iPhone kana iPad, kana kupa iyo odha, nguva yekupindura iri ipapo, pasina kumirira.
Imba kana Koogeek Kumba kunyorera, iwe unosarudza
Kuenderana neplatifomu yeKeKKin kune zvakanakira, uye izvo ndezvekuti chechitatu-bato kunyorera zvakanyatso kubatanidzwa muhurongwa, uye Iwe unogona kushandisa iyo yekuzvarwa iOS kunyorera kana iyo yekugadzira iyo pachako application zvisina basa. Koogeek Kumba, inowanikwa muTunes mahara, inotipa zvese zvatingaite nemusha uye zvimwe zvekuwedzera mabasa, chimwe chinhu chinowanzo kuve chakajairika mune zvigadzirwa zvevagadziri.
Haufanire kunetseka nezvekugadzirisa zvishandiso nezvose zvinoshandiswa: unozvigadzirisa mune chimwe chazvo uye zvatoonekwa kune vamwe vese. Ndicho chimwe chezvakanakira mashandisiro anoita HomeKit, Iwe unogona kunyange kudzora zvishandiso neyechitatu-bato maapp, nekuti nenyaya yakapusa yekuenderana neKeKKit vanoshandisa zvirevo zvakafanana uye zvinowirirana zvakakwana.
Iwo ma automation aunoita mune imwe application anozoonekwa mune ese mamwe, zvisinei kana iri iro reKumba app, Koogeek Imba kana imwe mhando yeImbaKit zvishongedzo. Asi sekutaura kwatakaita kune mamwe mabasa ari ega kune echinyakare app senge ruzivo rwekushandisa magetsi kunoitwa nezvinhu izvi. Dziri mbiri plug nebhuru girobhu zvinotiratidzira muKoogeek application iko iko iko kushandiswa kwavari kuita, pamwe chete necumulative imwe mumwedzi wega wega, kana vangounganidza ruzivo rwakakwana kuti vadaro.
Zvishongedzo zvinoenderana nezvatinoda
Smart bulbs anozivikanwa kune wese munhu akatanga muKeKKit nyika. Chokwadi imi mese munotiverengera uye makatopinda munyika ino mune mwenje girobhu kumba. Iyo Koogeek girobhu (E26 / E27 tambo) inotipa iyo irimo chaizvo yekushandisa (8W yakaenzana ne60W yeyakajairika imwe) uye ine simba rema500 lumens anogadziriswa kuburikidza nekushandisa uye Siri. Uine mamirioni gumi nematanhatu emavara haufanire kunetseka nezvekuti iri kudziya kana kutonhora, nekuti unogona kuzvidzora nezvaunoda. Iwo madiki anonakidzwa nemukana wekuchinja iro kara, kana iwe unogona kurishandisa kuumba nharaunda dzakasiyana munzvimbo yekutandarira. Kana mumwe munhu achida kuenderera achishandisa switch anogona kudaro, girobhu racho rinodzima richienderera sebhuru rakajairwa. Ehezve, kuti uishandise neKeKeKit, switch yacho inofanirwa kunge iri pachinzvimbo, zvikasadaro haizopindure.
Nekudaro, hazviwanzo kugoneka kushandura mabhuru ese mune imwe kamuri, uye kwete chete nekuti kudyara kwacho kunogona kuve kwakakwira, asi nekuti zvinogona kunge zviri izvo kuti mhando yegirobhu yatinayo mukamuri haienderane. Iyo Koogeek switch yakanakira aya mamiriro. Ivo vane akati wandei mamodheru. Isu takaedza switch iri nyore, uye kuiswa kwayo kuri nyore. Ini ndangofanirwa kuwedzera tambo isina kwayakarerekera kubva padyo padyo junction bhokisi, inotora maminetsi mashanu. Ruzivo rwakakosha kwazvo: iwo haashande kune switch. Mukana wakakura weshanduro ndeyekuti kunyangwe kana mumwe munhu asingade kushandisa HomeKit, vanogona kuishandisa seyakajairwa switch iyo inovhura uye kudzima painodzvanywa. Iyo yepakati LED inopenya girini painenge iripo, kusiyana neyakajairwa switch.
Uye chii chatinoita kana izvo zvatiinazvo iri rambi rine akati wandei mababu? Mhinduro yakachipa pari ipari plug yeKoogeek. Inoshanda zvakanyanya senge switch, uye kunyangwe Ine switch kumusoro iyo yatinokwanisa kuimisikidza uye kuimisa nemaoko, kune avo vanozeza kushandisa iyo iPhone, Apple Watch kana HomePod kubatidza mwenje. Kufanana negirobhu regirobhu, rinozotipa ruzivo rwekushandisa ikozvino uye yakaunganidzwa mwedzi nemwedzi kubva kuKoogeek Home application.
Siri, otomatiki, nharaunda ...
Mikana yatinayo neKeKKit yakakura kwazvo. Kuti ndipe muenzaniso, ini ndichakuudza otomatiki andakawedzera: patinosvika kumba, kana huri husiku, mwenje wemba yekutandarira unovheneka, uye kana tiri kumba uye husiku, mwenje wemba yekutandarira unobatidza. Zviri nyore kwazvo kugadzirisa, sezvaungaona mumufananidzo pazasi, unoratidza akasiyana matanho ekumisikidza eizvi otomatiki. Shandisa fungidziro yako uye gadzira yako wega.
Unoda here kudzima mwenje yese kamwechete? Gadzira nharaunda kuitira kuti kana uchienda kunorara magetsi ose adzime, pasina kuenda rimwe nerimwe. Uye kana iwe uchida kushandisa izwi rako, ndizvo zvaunazvo Siri. Kubva kune yako Apple Watch, iPhone kana iPad unogona kupa rairo kumubatsiri weApple kudzima mwenje, kudzima, kudzima kana kushandura ruvara rwegirobhu racho. Uye neiyo HomePod, sezvaungaona muvhidhiyo, kunyangwe panguva yacho ichifanirwa kunge chiri muChirungu, zviri nyore kwazvo kutonga yako ese HomeKit.
Nemitengo inodhura kwazvo, kudzora mwenje wako wese wepamba "smart" imhepo ine zvishongedzo kubva kuKoogeek. Iyo yekumisikidza iri nyore kwazvo, mukati mekusvikwa nechero ani, kungave kubva kuApple Kumba kunyorera kana kubva kuKoogeek Kumba application. Izvo zvishongedzo zvinoshandisa mukana wese mukana unopihwa neApple's HomeKit chikuva, ine otomatiki, nharaunda, kutonga kuburikidza neSiri, nezvimwe. Kutenda kuitisa kweWiFi, mhinduro yavo inomhanya kwazvo uye hapana matambudziko ekuti uzviise chero mumba, zvisinei nekwaunowana nzvimbo yekuwanira (iPad, Apple TV kana HomePod). Kutenda kune akasiyana siyana ezvishongedzo, unogona kusarudza kubva kune rimwe girobhu kuenda kuchinjana chinogadzirisa ese ari mukamuri, kana chigadziko chemwenje. Izvo zvishongedzo zviripo paAmazon:
Koogeek plug: € 48,20 (link)
Koogeek chinja: € 40,99 (link)
Girobhu reKoogeek: € 29,99 (link)
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » HomeKit-inoenderana nemwenje yekuvhenekesa yekutenda kuna Koogeek
Dambudziko rimwe ne plug ye koogeek ndeyekuti zvinoenderana neiyo router (iwo ayo makambani enhare akagadzwa nekutadza) iyo Wi-Fi yekubatanidza inowanzo kurasika mushure memazuva matatu kana mana, ichimira kupindura kusvikira iwe waburitsa uye wovhara chishandiso mukati uye plug inogadziriswazve.
Jimmy iMac akadaro
Chandisingade pamusoro peiri girobhu randiinaro, nderekuti ndeyemwenje mazana mashanu uye kumarambi echipiri anoenda zvakanaka asi kwete kuve iwo mukuru, kana marambi ePhilips Hue akakosha katatu kakapetwa anosvika 500 lumens anoshanda uve mwenje mukuru weimwe nzvimbo.
Pindura Jimmy iMac
Chaizvoizvo, ndinobvumirana neyekutanga kutaura. Ndine 1 Kogeek plugs uye imwe Elgato. Ini ndaifanira kudzima yangu router 3ghz bhendi kubva zuva rega rega, ini ndakamanikidzwa kubatanidzazve mapaki.Huya, zvese zvinoshanda Imba, unozvirasa nekusawirirana kwemabhandi. Ikozvino ne5ghz zvinhu zvave nani, asi kana iwe uine Wi-Fi yekuwedzera, izvo zvakafanana zvinogona kuitika kwauri. Mazuva ese eX, ini ndawana nguva, zvinodikanwa kumisazve zvakadaro nekuti ini handizive kuti nei plug iri kure kubva mumba, kunyangwe iine extender, zvinoita sekuti "Hapana kubatana". Kubatana; zvakachipa zvinodhura. Ndiri pachena, ndichatengesa Kogeek uye ndotenga Elgato nekuti ndinorasika njere neidzo zvipingaidzo ...
Mhoroi, ndichiverenga chinyorwa chandakafunga "pakupedzisira chimwe chinhu chakachipa uye chinoshanda neApple HomeKit", asi ndichiverenga zvirevo, ndazvidza. Ini ndinoshandisa weBelkin wemo uye vanoshanda nemazvo asi anodhura zvakapetwa kaviri. Uye ini ndanga ndichitsvaga switch kuti ndikwanise kudzidzora neiyo iPhone asi iyo wemo mwenje switch haizi yeEurope. Mubvunzo wangu ndouyu: Kurasikirwa kwematambudziko ekubatanidza kunoitikawo nekuchinja?
Manuel Enrique akadaro
Ndine plug, uye dambudziko randinoona nderekuti Apple TV yangu handigone kuve yakabatana neiyo router kuburikidza neethernet, ndinofanira kuve nayo ne2g wifi, saka ndinorasikirwa nekubatana pane yangu Apple TV 4K, ndizvo zvakajairika here?
Pindura Manuel Enrique
Luis Padilla akadaro
Kwete, unogona kubatanidza Apple TV kuburikidza neEthernet pasina matambudziko.
Pindura Luis Padilla
Spotify naHulu vanobatana nemauto kuti vape basa rakabatanidzwa
Dzimwe iPhone X uye iPhone 8 dzinorasikirwa neyakavhenekera mwenje sensor kana uchichinja mascreen